Bakhala ngocansi "oluphazamisa abafundi" - Ilanga News
Home Izindaba Bakhala ngocansi “oluphazamisa abafundi”
Bakhala ngocansi “oluphazamisa abafundi”
Isigungu sithi mabaphume baphele abahlala kulesi sikole
okuthiwa luphazamisa ukufunda nokufundisa ePhambili High School, eSeaview, eThekwini, osekuholele ekutheni umphakathi uzame ukuxosha amalungu emindeni ehlala esakhiweni esiyingxenye yalesi sikole.
Sekusuke omkhulu embango ngalesi sakhiwo okuhlala kusona le mindeni ewu-5 ethi yayinikwa wumnyango wezemisebenzi yomphakathi imvume yokusisebenzisa
eminyakeni engaphezulu kwewu-20 edlule.
Kuthiwa kwakuyisikole sabamhlophe abasishiya emuva kokuba kuthathe uhulumeni wentando yeningi.
Ilungu lesigungu esilawula isikole, uMnu Lebohang Makhetha, lithi akusebenzeki njengoba
amanye amalungu ale mindeni ebhema insangu phambi kwabafundi, kwenziwa ucansi emini, kanti nabesifazane bake baphume bembathe amathawula.
“Izingane ziboniswa amanyala, zizofunda siphi isifundo? Laba bantu bahleli ngokungemthetho.
Bayakhala othisha, kunuka insangu, akufundiseki, babiza ngisho abangani babo abafika lapha kugcine kuphazamiseka abafundi.
Izingane zilalela imikhuba okungafanele ngabe ziyayizwa,” kusho uMnu Makhetha.
Uthi sebehambe ngisho izinkantolo bezama ukulungisa lolu daba. Uveze nokuthi lesi sikole
sibhaliswe ngokusemthethweni emnyangweni wezemfundo ngo-1997 emuva kokuba sasivulwe nguNkk Florence Mkhize (ongasekho), owayeyisishoshovu se-ANC.
Ilungu lemindeni ehlala kulesi sikole elicele ukungadalulwa igama lalo lithi yilona
elanikezwa le ndawo wuhulumeni ngo-1995.
Lithi le ndawo yayisimbozwe yizihlahla emuva kokuba abamhlophe (abangama-Bhunu) basishiya isikole, kanti nabo babekade besithathe kwabaseGermany ngaphambi kuka-1948.
“Nganikezwa le ndawo ngokusemthethweni ngaze ngabiza eminye imindeni ukuba
sizohlala sonke ngoba ngangesaba ukuhlala ngedwa. Izingane zami ngazitholela
kuyona le ndawo, ngisho umyeni wami ushonele kuyona.
“Uma bethi mangiphume, bathi ngizohlalaphi?” kusho ilungu. ILANGA lithole ukuthi bekuhlala imindeni engaphezulu kuka-10 kule ngxenye yesikole
eyayiyinkulisa, enenqwaba yamagumbi.
Kuthiwa ngo-2018, kwahlasela abafundi bashaya kwasani olwaluphakathi kule ndawo, eminye imindeni yatshatha imithwalo yacela empunzini, kwasala lena ewu-5 ethi izophuma uma isitholelwe izindlu zomxhaso.
Lesi sikole sihlukene kabili, esinye isakhiwo singaphesheya komgwaqo, kufundela kusona
uGrade 10,11 no-12 kanti kulesi okuhlala kusona le mindeni kufundela uGrade-8 no-9.
Le mindeni ithi yona ithuke yoma ngo-2018 isibona lapho ihlala khona sekufakwa ibhodi
ngaphandle, elibhalwe igama lesikole ekubeni yonke le minyaka bekusetshenziswa isakhiwo
ILANGA libone ngisho incwadiyaseNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu egunyaza le mindeni ukuba ihlale kuze kuxazululeke lolu daba.
UMnu Sizwe Lombo ohlala kulesi sakhiwo sesikole esisuse umsindo uthe akulona iqiniso
ukuthi egunjini ahlala kulona kwenziwa ucansi emini ngesikhathi sokufunda.
Uthi uyasebenza emini futhi uyavalwa umnyango ngisho noma ngabe kuyabhenywa.
Okhulumela uMnyango weze-Mfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthi lokhu okwenzekayo kuhlukumeza abafundi.
“Sizongenelela kulolu daba sibheke ukuthi lwaluthini uhlelo lwale mindeni,” kusho uMnu
Okhulumela uMnyango wezemi-Sebenzi yoMphakathi KwaZulu-Natal, uMnu Mbulelo Baloyi, uthi kabasesiyona ingxenye yalolu daba, seluphethwe wumnyango wezemfundo esifundazweni nomthetho.
Uthi akusilona iqiniso ukuthi umndeni ulindele bona banqume ngekusasa lawo.
Previous articleIzingane ziweliswa ngabazali emfuleni
Next articleUMQEQESHI WOSUTHU UBONA ESENGAKWAZI UKULUHLENGA